I-200 Mb Fibre Rate yePepephone iyafumaneka ngexabiso elifanelekileyo | I-Androidsis
UPepephone uye waba ngomnye wabasebenzisi abaziwayo kwimarike. Okwangoku banokukhetha uluhlu olubanzi lwamaxabiso, omabini amanani omnxeba kunye nefayibha. Kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo, i-100 Mb yefreyithi yenqanaba yaqala ukunika abasebenzisi kabini i-megabytes, into engayi kutshintsha. Kwaye ngoku kukho uphuculo olutsha kuyo.
Ke unokufumana enye yexabiso leenkwenkwezi zePepephone ngophuculo olungakumbi, kunye nexabiso elifanelekileyo. Kuba esi sesinye sezitshixo sempumelelo yomqhubi, igcina amaxabiso asezantsi ngawo onke amaxesha eyona inomtsalane.
Umyinge osinika i Isantya esikhulu se-intanethi endlwini yethu, ilungile ukuba siyayidinga emsebenzini okanye kwizifundo, ukuze sihlale sinokhuseleko lokuba sikwazi ukonwabela unxibelelwano oluzinzileyo kunye nomgangatho. Libandakanya ntoni eli zinga?
1 Umgangatho wefayibha 200 MB Pepephone
2 Ungayifumana njani le nqanaba
Umgangatho wefayibha 200 MB Pepephone
Njengoko igama layo libonisa, eli nqanaba lisinika ii-Mb ezingama-200 ezilinganayo ekhaya. Unxibelelwano olusebenzisa i-fiber optics, olusinika isantya esikhulu, kunye nonxibelelwano oluzinzileyo. Ukhuseleko olufunwa ngabasebenzisi abaninzi kwaye baya kuba nakho ukulifumana ngeli nqanaba ngalo lonke ixesha.
Olona tshintsho luphambili luye lwaziswa ukuba I-Pepephone ngoku ine-intanethi kwi-Movistar. Le yinto eya kuthi inike abasebenzisi uxolo lwengqondo ngakumbi, inikezwe uthungelwano olubanzi uMovistar analo eSpain namhlanje. Ke ukuba kukho into eyenzekayo, baya kusebenzisa ingxelo yomqhubi. Ke, unokusebenzisa i-Intanethi ngalo lonke ixesha. Ukongeza kwi-Movistar, banokwazi ukufikelela kwi-Orange kunye neMásMóvil.
Ixabiso lale nqanaba ngama-34,60 euros ngenyangaIVAT ifakiwe. Ixabiso elifikelelekayo lonxibelelwano oluhle. Yinqanaba elinokusisigxina kwiinyanga ezili-12. Ke ngoko, lukhetho olufanelekileyo ukuba uhlala kwigumbi labafundi, ukuze ube nokunxibelelana unyaka wonke, ukuze ukwazi ukufunda okanye ukusebenza ngaphandle kwengxaki. Kananjalo ukuba utshintsha idilesi yakho ngumgangatho olungileyo.
Ukuba ufuna unayo ithuba lokukhetha eli nqanaba ngaphandle kwesigxina. Kule meko, uPepephone ucela umrhumo wobhaliso we-90 euro kwaye kubandakanya umzila wabasebenzisi. Ke unokukhetha indibaniselwano efanelekileyo kuwe ngamaxesha onke.
Ungayifumana njani le nqanaba
Ukuba unomdla wokufumana eli nqanaba, Amanyathelo okumqesha alula kakhulu. Unokufunda yonke into malunga nayo, kunye neemeko zayo kwaye ulandele amanyathelo okuyiqesha kuyo esi sixhobo. Kuyo unalo lonke ulwazi oludingayo malunga nale nqanaba, ukuze wenze isigqibo ngendlela efanelekileyo.
Njengoko ubona, elinye lawona manqanaba aphezulu ePepephone ngoku angcono. Ungaphoswa leli thuba kwaye ulibhukishe ngoku!
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Abasebenza ngefowuni » Fumana i-200 Mb Fibre Rate kwiPepephone ngexabiso elifanelekileyo
ULucas Gonzalez sitsho
Kuqhelekile ukuba iPepephone ibe yenye yeenkampani ezisebenza kakhulu kule minyaka idlulileyo kuba ibonelela ngamaxabiso okhuphiswano, i-200 mb yefayibha ye-34,60 ibonakala njengexabiso elifanelekileyo.
Phendula uLucas González
Nditshintshele kwi-Pepephone ngenxa yokucaca kwayo kunye namaxabiso amahle, bayakwandisa ukuthengisa kwaye banesabelo esikhulu sokugubungela, kucetyiswa kakhulu!